1. Naqshadaynta maaskaro jilicsan oo cusub. Cusbooneysiin sare iyo qeexitaan sare.
2. IP65-biyo-ma-geydo, Kaas oo ah wax-qabad sarreeya oo aan biyuhu xirin, aan u babin karin iyo miridh diidka.
3. Waxay si fiican ugu shaqeyn kartaa dhammaan noocyada cimilada culus ee banaanka, iyo waliba ku habboon jimicsiyada gudaha.
4. Shaashaduhu waxay qaataan naqshad xagjir ah oo xagal gaar ah, oo lagu hagaajin karo qaybaha kala duwan Xagasha (75 ° ~ 90 °) marka loo eego isticmaalka malaa'igta shuruudaha, u oggolow dhammaan dhagaystayaashu inay arki karaan waxa ku jira baahinta tooska ah ama rakibidda
1.Ka-hortagga biyuhu gaar ahaaneed iyo kuleylka kuleylka, ayaa lagu rakibi karaa gudaha iyo dibedda. Heerka ilaalinta IP sare IP65 wuxuu hubiyaa Bixiyaha wax soo saar tayo sare leh xaalad kasta ha noqotee.
Fasalka ilaalinta warshadaha, IP65 caddeyn habaas leh iyo biyuhu.
Bandhigu wuxuu qaataa IP65 roobab iyo qolof dhabarka caddayn ah oo cufan, cirbadda daaweynta caagga ah ee aan biyuhu xirnayn iyo fur shaabadda shaashadda jirka ee go'an, shaqo-wanaagga iyo kormeerka nidaamsan si loo hubiyo tayada wax soo saarka.
Kordhinta Bilaashka ah ee Bilaashka ah
Kala-bixin la'aan iyo kala-goyn la'aan, farqiga la hagaajin karo, rakibaadda dabacsan. Teknolojiyada fidinta fiidiyowga waxaa loo isticmaali karaa cabir kasta si loo hubiyo in sawirku uusan qalloocin oo sawirku cad yahay oo dhalaalayo.
Technology Teknolojiyada SMD
Angle Xagasha daawashada ballaaran (140 * / 140 °)
At Saamiga isbarbar dhiga sare
U shaqaynta xasiloonida bannaanka
Dammaanad & Adeeg
Si ka duwan shirkadaha badankood, annaga Eachinled waxaan halkaan u joognaa inaan hubinno in bandhigyadaadu ay daboolan yihiin markaad u baahan tahay iyaga inta badan. Waxaan ka dabooleynaa dariiqyadeena gees ilaa gees, pixel ilaa pixel oo ay ku jiraan dhammaan dhinacyada shaashaddaada LED-ka. Eachinled LED wuxuu damaanad qaadayaa dhammaan badeecadeena muddo 3. 5 sano ah iibsadaha asalka ah, si uu uga madax banaanaado cilladaha ka imanaya shaqada iyo qalabka sida caadiga ah loo isticmaalo sida loogu talagalay Eachinled muddada damaanadda oo dhan.
238sqm P10 Kubadda Cagta Kubadda Cagta Idle Screen In Ivory Coast
Hore: P6.67 Bandhigga Kirada Dibadda ee LED
P6 Shaashadda Bannaanka Xayeysiinta Dibadda ee Dukaameysiga ...